Ikhonkco lokuFumana incwadi yokudlala | Martech Zone
Ikhonkco lokuFumana lokuFunda
NgeCawa, ngo-Novemba 4, 2012 NgoMgqibelo, Novemba 3, 2012 Douglas Karr
Ngokukhawuleza xa abanye abantu beqonda ukuba amakhonkco kwiindawo zangaphandle anokuqhuba inqanaba lakho kuGoogle, imboni ye-SEO yaqhuma ekukhuleni. Kwakuyimakethi yezigidigidi zeedola kwaye uGoogle waphulukana nolawulo ngokukhawuleza lokubonelela abasebenzisi ngeziphumo ezilungileyo. Yajika yangumncintiswano wokuba ngubani ohlawule ezona ziqhagamshelo zasemva. Ngombulelo, kubathengisi abafanelekileyo, ezi Abakhohlisi be-SEO bamiswe kakhulu. Utshintsho lwe-algorithm lukaGoogle luye lwatyhila amakhonkco abekwe kakubi kwaye sele beqalisile ukohlwaya iinkampani apho zifumana khona amakhonkco angaqhelekanga.
Amakhonkco athathwe ngenjongo yokutshintsha okanye ukuxhaphaza iziphumo zophando zophula iZikhokelo zikaWebmaster zikaGoogle.
Kwaye ungakholelwa nakubani na othi ungawuthenga umxholo kunye namakhonkco kwaye ngandlela thile ayophuli imigaqo. Ukuba injongo yomxholo othengiweyo yayikukubeka eli khonkco, usaphula iMigaqo yeNkonzo kaGoogle!
Le infographic, Ukuchukumisa ubuchule-Ikhonkco lokuFunyanwa kweNcwadiI-infographic enkulu ichaza imiceli mngeni, izikhokelo kunye namathuba okwakha amakhonkco ngokwendalo. Impendulo, ewe, yeyokulibala amakhonkco konke konke kwaye ujolise kwimizamo yakho ekuphuhliseni umxholo omangalisayo.
Umxholo omkhulu kwabelwana ngawo. Ukwabelana kwenziwa kwinethiwekhi ezifanelekileyo. Ukwabelana ngokufanelekileyo kuqhuba amakhonkco afanelekileyo. Amakhonkco afanelekileyo aqhuba isikhundla.
tags: amakhonkco okwakhaikhonkco lokufumanaukwakha ikhonkcoUhlobo lwezinto eziphilayouphando lwezinto eziphilayoUphando lwezoPhandoSEO
Amanyathelo ama-5 okunyusa iTrafikhi kunye nokuGuqula iiNdlela zibe ngabaThengi
Ukunyuka kweScreen seSibini
Nov 8, 2012 kwi-10: 57 AM
Ukusetyenziswa kakhulu kwesigama sebhola ekhatywayo ukuze ufumane inqaku lakho malunga neendlela ezilungileyo nezingalunganga zokwakha ikhonkco ngendlela eyahlukileyo. Andinguye umlandeli kaPeyton Manning (ovela eNew England) kodwa ndiyayixabisa! Ndiyithanda kakhulu inqaku malunga "nokusasaza ibhola ngeenxa zonke". Ukuze uphucule ukubonakala kwakho kwaye ufumane amakhonkco ngokwendalo, kuya kufuneka umxholo wemveliso kwiipropathi zewebhu ezingezizo ezakho.
Mar 2, 2016 ngo 6:45 PM
Umxholo omkhulu ekwakhiweni kwekhonkco. Ngokuqinisekileyo ndiya kuyisebenzisa le ndlela.